Vaovao - Fantatrao ve ireo fiasa lehibe momba ny efijery vy
Ireto ny efijery vy manaraka ireto:
Fizahana: ampiasaina amin'ny akora matevina, vovoka ary fisavana amin'ny metallurgy, arina, fingotra, solika, indostria simika, fivarotam-panafody, fiara, seramika, vera ary indostria hafa.
Fiarovana: ampiasaina indrindra amin'ny fananganana sivily, simenitra maromaro, fiompiana akoho, gana, gisa, bitro ary fefy zoo. Fiarovana fitaovana mekanika, arofanina mpiambina arabe, fefy kianja, harato fiarovana fehin-kibo maitso.
Filtration: ampiasaina amin'ny efijery fotaka amin'ny indostrian'ny solika izy io, ny tabilao pickling ao amin'ny indostrian'ny electroplating fibre simika ary ny fanadiovan-tsolika ary ny fanadiovana.
Fanamboarana: azo ampiasaina amin'ny fanamafisana sy ny fanohanana ny taolana amin'ny indostrian'ny fanorenana, ny làlambe ary ny tetezana.
Manana ny fahazoana ny fiasa efatra amin'ny efijery vy ve ianao? Raha te hahalala bebe kokoa momba ny efijery vy ianao dia tsidiho azafady ny tranokalanay
Fantatsika rehetra fa ny pikantsary dia manana fampiharana marobe, ary izy io koa dia afaka mitana andraikitra amin'ny fitsaboana maloto. Noho izany, inona no anjara asan'ny efijery amin'ny fizotran'ny fitsaboana ny loto? Manaraka, hampiditra azy i Xiaobian
Ny anjara asan'ny efijery amin'ny fitsaboana maloto.
Ny efijery dia ny sampana fitsaboana ny toeram-pitsaboana fanadiovana ny maloto, izay matetika no eo anoloana ny firafitry ny fitsaboana tsirairay (tobin'ny paompy, efitrano fitehirizana, tanky sedimentation ary faran'ny fidiran'ny rano). Ny asany lehibe indrindra dia ny fanesorana ireo zavatra marokoroko ao anaty rano, hiarovana ireo fitaovana mekanika an'ny ozinina fitsaboana (indrindra ny paompy) ary hisorohana ny fanakanana mangatsiaka amin'ny fantsona.
Fotoana fandefasana: Aug-24-2021